Wholesale PVC Cable Trunking Extrusion Line Mugadziri uye Mutengesi | Qiangsheng
PVC tambo trunking extrusion tambo inonyanyo shandiswa kugadzira PVC Mbiri diki sePVC Skirting mbiri, rusvingo kona kona, PVC tambo trunking mbiri ine akasiyana chikamu chimiro uye kukwirira. iyo yepamusoro yePVC mbiri / pani inogona kurapwa nekudhinda & yakavharwa nemafuta akasviba, kana nekudhinda kupisa kudhinda, kana ne lamination, inogona kuita kushongedzwa kwakanaka kwekicheni, chimbuzi, balcony zvichingodaro.
Mutsetse wekuwedzera unoyerera sezasi:
SJSZ Series Conical Twin Screw Extruder → Die muforoma → Vacuum Calibration Tafura → Kukwezva-offs uye Kucheka Machine Kubatana → Stacker → Kudzora kabhodhi (Cherekedza: Mamwe Anobatsira Mushini, senge crusher, chisanganiso, ichagoverwa zvinoenderana nemutengi zvinodiwa)
Zvinoumba PVC trunking:
PVC trunking ine hunhu hwekuputira, arc kudzivirira, murazvo unodzora uye kuzvidzimisa.
Basa rePVC trunking:
PVC trunking inowanzo shandiswa yemukati wiring yemagetsi michina. Mumidziyo yemagetsi ye1200V uye pazasi, inoita basa rekudzivirira kwemuchina uye kuchengetedzwa kwemagetsi kune waya akaiswa imomo. Mushure mekushandisa PVC trunking, iyo wiring iri nyore, iyo wiring yakashambidzika, kuisirwa kwakavimbika, uye zviri nyore kuwana, kugadzirisa uye kuchinjanisa mitsara.
Kune akawanda marudzi uye magadzirirwo ePV trunking. Panyaya yemamodeli, pane:
PVC-20 akateedzana, PVC-25 akateedzana, PVC-25F akateedzana, PVC-30 akateedzana, PVC-40 akateedzana, PVC-40Q akateedzana, nezvimwe.
Panyaya yezvakataurwa, pane:
20mm * 12mm, 25mm * 12.5mm, 25mm * 25mm, 30mm * 15mm, 40mm * 20mm, nezvimwe.
Pashure: PVC sirin'i uye madziro emadziro ekugadzira mutsara
Zvadaro: PP kurongedza bhandi extrusion mutsetse